Dhacdoyinka waawayn ee Todobaadkan Itobiya kadhacay. | ogaden24
Dhacdoyinka waawayn ee Todobaadkan Itobiya kadhacay.
Dalka Itobiya waxaa badhtamihii Todobaadkan ilaa subaxnimada saak ah kadhacay dhacdoyin waawayn oo siyaasadeed, kuwa Amni iyo kuwo bulsho inta ba waxaana Qodob Qodob usoo Qaadanaynaa dhacdooyinkaasi, waxaana usoo Qaadanaynaa sida ay u kala Horeeyaan Qodobadan Hoose.
1-Wasiirka Arimaha dibada ee Ethiopia oo UN chief umagacaabay UNON Director General.
2-Madaxwweynaha Amhara Region Gedu Andargachew oo is casilay.
3-Adiis Ababa oo bulshada Oromadu kacdoon kabilawday.
4-Abiy Ahmed oo Farmaajo Kenya u kaxeeyay.
5-Shir Qabiileed Dir Lagu sheegay oo ka dhacay Addis.
1-Wasiirka Arimaha dibada ee Ethiopia Workneh Gebeyehu oo uu UN chief in magaxaavay UNON Director General.
Isbadelkan ma aha mid qilaaf Ku yimaaday, ee jago ahaan waa.mid Muhiim ah shaqada uu xafiiskan qabto waxbadan aya Ku leedahay siyaasada Africa iyo sida ay wadamada reer galbeedka ay u arkaan Africa, Marka fikriyan tan guul bay u tahay horumarka siyaasda Ethiopia/oromo, laakiin wax aad ubadan ma bedali karo.
Arintan waa mid aan bilihii la aoo.dhaafay aan si gaar ah u xiiswynayey. Bilhii la soo dhaafay waxaa dagaal hoosaad ka dhaxsocsay labada maamul ee Tigereega iyo Amarada.
Maamulka Tigreegu wax uu sitcmaaliyey qabiil yar oo daga Amhara region oo la yiraahdo Qemant. Ilaà iyo 69 degmo iyaa is maamilu watafii horana Amhara ayaa Lagu xisaabin jiray. Hada ilaà iyo dhowr devmooyin oo kale ayay rabaan in ay ismamulaan.
Laakiin dawlad gobeleedka Amharada ayaanan u ogaleyn, waxayna leeyhiin arintan Tigrega ayaa ka Dan beeya, ciidamo Qemant ahna tababar siinaya.
Taas waxay keentay in ciidamo tiro badan uu gobalka Tigreega ah ay xuduudka u dhexeya ay keeneyn. Halaka Madaxweynaha Amharada ay Ku qaadaytay in uu ka jawaabo ama xal kakeeno qilaafaadka dagaaleed ee ka socda gudaha Amharada fobolkooda.
Hada ciidamo tiro badan oo labada gobal ka kala socda ayaa is hortaagan. Qolyihii u arkayey in Gedu uu liciifyahay ayaa xukunka la waeeegay. Ninkan waxaa Lagu yaqaanay in uu marwalba rabo in ay Ethiopia dadka Ku nool ay waxwalba Ku xaliyaan si nabad ah markaatna ka soo horjeeday dagaalka sakooye.
3-Adiis Ababa oo ay Dhalinyaro Oromo ah ay Banaabaxyo ka samaysaynayeen
Banaan baxyadan oo Ku saabsanaa Guryo Laga dhisay Addis Ababa nawaaxigeeda waqtigii dawladii TPLFta, dhulkana si sharci daro ah Lagu bixiyey. Laakiin dadbadan oo 50 kun Ku dhawaad ah ay soo dagi lahayeen amaba qaar ay degan yihiin, ayay dhalinyaradu ka banaan baxaday, dowlad gobelkeena Oromadana ay Ku raacday, dhahdayna waa in dib loogu noqdo sida dhulka loo baxshay.
Tan waxay Ku tuaaysysaa in ay Oromadu ay rabto xaqeedii Addis Ababa ay soo ceshato, dawlada dhexe iyo ta gobalkeedana ay u dhaga nugulyihiin waqtigaan qalad iyo saxba.
4-Farmaajo iyo Abiy oo Kenya isku raacay.
Dadbadan ayaa Ku heysta PM Abiy in uu siyaasadii arimaha gudaha uu ka mashquulay ayaamihij ugu danbweyey.
Waxbadan oo ka soo baxay ma Jiro kulankii Nairobi, oo.aanan ahayn in cilaaqaadkii la soo celiyo, wadahdalna Lagu xaliyo arimahan. PM Abiy waxuu balanqaday in uu diyaar u yahay in uu dhaxdhaxadyo arintan. Laakiin. Doada soomalidu waxay Ku ksoon tahay mackamada afuunka.
5-Shir Qabiileed oo Dir Lagu sheegay oo ka dhacay Addis.
Dibaan u dhiganyaa, wax badan baan ka ogahay waxna waan tuhunsanahay, waanana Arkay sida ay madaxda wadanka iyo derisku ay uga hadleen, Waanan la hadlay dadka ay qusaysay Iyadoo qoraal ah oo ku socata dowlad deegaanka, federalka iyo dowlada deriiska ahma waan diyariney, Hada ma ogalaanayno in nalooga sheekeeyo qabiilada deegaanka degan iyo Yaa ugu tiro badan.
Arimahan oo dhan waxay Ku tusaysaa in xaalad kasta ay badali karto xasiloonida gobalka Mid walbana ay u baahan tahay fiiro gaar ah.
Bye: Ahmed Yasin